हामी सम्मानजनक एकताका पक्षमा छौं:... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
हामी सम्मानजनक एकताका पक्षमा छौं: महरा
समसामयीक राजनीतिक परिवेशमा सेतोपाटीका नारायण खड्काले दाङमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँग लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:
दुई पार्टी एकताको प्रयास कहाँ पुगेको छ ?
दुबै पार्टीवाट गठित कार्यदलले काम काम गरिहेको छ। कार्यदल वैचारिक र राजनीतिक संगठनको कामहरु प्रारुप बनाउछ, त्यसपछि पार्टी एकताले गति लिन्छ।
पार्टी एकताको मोडालिटी के हो ?
यो एकदमै सम्वेदनशील कुरा हो। हाम्रा केही बैचारिक मतभेद छन्, राजनीतिक मतभेद छन् । संगठन अलग अलग छन। दुई पार्टी हुन्। कतिपय विषय दिर्घकालिन खालका प्रकृतिका छन्, त्यसलाई महाधिवेशनमा गएर छलफल गरिन्छ। कतिपय तत्काल हल गर्ने कुरा छ। अनि संगठनात्मक रुपले केही नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्ने छ। मुख्य तहका मुख्य नेताहरुले कसरी जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने कुरा छ । यो विचारमा परस्पर छलफल भइराख्या छ। अहिलेनै मोडालिटी यस्तो हुन्छ भन्ने छैन।
सैद्धान्तिक बिषय कासरी मिलाउनु हुन्छ? तपाईहरु माओवाद मान्नुहुन्छ,एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छ?
त्यो छलफलको विषय हुन्छ। अहिले हामी एमाले माओवादीमा विलय हुने वा माओवादी एमालेमा विलय हुने कुरा होइन। यो पार्टी एकता भनेको दुई वटै पार्टीले आफ्नो पुरानो सोच र चिन्तन,धारणालाई बदल्ने र नयाँ ठाउँमा पुग्ने कुरा हो। यसले मात्रै सम्मानजनक पार्टी एकता हुन्छ र त्यसले नयाँ चिज लिन्छ। एकता एमाले वा माओवादी भन्दापनि देशलाई चाहिएको हो। देशले नयाँ विचार खोज्या छ, नयाँ राजनीति खोज्या छ,नयाँ संगठन खोज्या छ र त्यसैले नयाँ उचाईमा उठ्न सक्नु पर्यो हामी सबै। हामी माओवादीहरु माओवादीमा मात्रै बस्ने, सोच्ने चिन्तनमा छैनौ। एमालेको नेताहरुपनि अब त्यही ढंगले सोच्नु पर्यो। उहाँहरुले अब उही ढर्रामा बसेर हुँदैन देश, देशलाई अलि अगाडि बढाउनु पर्यो, भन्ने धारणा अवधारणाले मात्रै पार्टी एकता सम्भव हुन्छ । त्यसैले हामी दुबैपार्टीका नेताहरुले त्यो महसुश गरेको कुरा छ । त्यसैका आधारमा केन्द्रित रहेर छलफल बहस सुरु भएको छ र त्यही आधारमा एकता हुन्छ ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्वको बिषयमा कसरी सहमति खोज्नुहुन्छ?
त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। हामी छलफल गरेर निस्कर्ष निकाल्छौं। छलफलमा अनेकौं कुरा आएका छन्। छलफलमा एउजना प्रधानमन्त्री, अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्नेकुरा आएका छन् वा दुबै सह–अध्यक्ष भन्नेकुरा आएका छन्। अब केही विषयहरु फेरि दुबै पार्टी एउटैले लिने भन्नेकुरा पनि आएको छ र यि छलफलमा उठेका प्रश्न मात्रै हुन्, निस्कर्षमा पुगेका विषय होइनन् । उठ्ने वित्तिकै निस्कर्षमा पुग्दैन क्या!
एमालेका कतिपय नेताले अहिलेलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीनै हुने कुरा गर्दै आएका छन् ?
नेकपा माओवादीले त्यो हुँदैन भन्या छ नि! त्यो पनि त तर्क हो। त्यो हुँन सक्दैन। माओवादीले सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्याछ। सम्मानजनक हुँदा त्यस्तो हुँदैन। सम्मानजनक हुनका निमित्त कम्तिमा पनि मुख्य नेताहरुले मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दा राम्रो हुन्छ । एउटा नेताले प्रधानमन्त्री र एउटा नेताले पार्टी अध्यक्ष सम्हाल्दा सबैभन्दा राम्रो उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो मेरो कुरा हो र मेरो विचार हो । तर छलफल, बहस हुँदा खेरी नयाँ कुरा निस्कन पनि सक्छ। त्यही भएर हामी सकेसम्म नयाँ चिज निकाल्ने पक्षमा छौं ।
प्रचण्डले अवको प्रधानमन्त्री केपी भन्नु भएको छ, हैन?
प्रचण्डले केपीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेपछि केपीले पनि प्रचण्डलाई तपाँई पार्टी अध्यक्ष हुनुस् भनेको होला। हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो छ र त्यही राम्रो हुन्छ। यो सबै छलफल मार्फत टुङ्गो लाग्छ। तर
प्रधानमन्त्री हुने कुरापनि उहाँले भन्ने वित्तिकै हुँदैन, अध्यक्ष वा राष्ट्रपतिको सवाल पनि त्यही हो। मैले भने नि छलफलका क्रममा यि सबै विषय उठेका छन् तर निस्कर्षमा पुग्न बाँकि नै छ ।
माओवादीका कार्यकर्ता पार्टी एकता बराबरीमा हुन्छ कि हुँदेन भनेर चिन्ता छ?
चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। पार्टीको अवस्था के हुने हो र आफूहरुको अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता जाहेर हुनु उचित हो। तर मैले बुझेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो भन्दा धेरै माथि उठेर सबैलाई समेटेर सम्मानजनक ढंगले अगाडि लाने र दुईवटा पार्टीका बीचमा सम्मानजनक एकता खोज्नु भएको छ। सम्मानजनक एकता सोच्नु भएको छ । मैले अहिले भने नि, यो देशको आवश्यकता हो , राष्ट्रको आवश्यक्ता हो, जनताको चाहना पनि हो । यस्लाई सम्बोधन गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन्छ। बर्तमान राजनीतिक धारलाई प्रयोग पनि गर्ने, विकसित गर्ने चुनैतीसँग जुध्न सकिन्छ। जनताले विकास खोजेका छन्, विकास गर्नुपर्यो। स्थायित्व खोजेको छ स्थायित्व दिनुपर्यो। शान्ति खोजेको छ शान्ति दिनु पर्यो। यो कस्ले गर्न सक्छ , कस्ले सामना गर्न सक्छ ? त्यो यि सबै विषय र उदेश्यलाई सामना गर्ने गरि छलफल हुन्छ।
माओवादीलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन र अहिले गठवन्धन गर्न यहाँको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ? तर यहाँले नै यसअघि काँग्रेससंगको तालमेलका लागि पनि भूमिका खेल्नु भएको थियो। अब तपाँईको भूमिका कस्तो होस् भन्ने चाहाना छ ?
त्यो भूमिका त अहिले म भन्न सक्दिनँ। मैले के योगदान गरेको छु भन्ने कुरा पार्टीलाई थाहाँ छ , जनतालाई थाहाँ छ । म कहाँ बस्दा पार्टीलाई फाईदा हुन्छ, अरुलाई र जनतालाई फाईदा हुन्छ त्यो पार्टीले निक्र्याेल गरोस। यस्तै हुनुपर्छ भनेर मैले दाबी गर्नु हुँदैन ।
कतिले त शंका गरेका छन्, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमानहरुले एकता रूचाएका छैनन्। कुरा के हो?
बिल्कुल सही हैन। बिल्कुल गतल हो। यो बाहिर जसरी आएको छ नि, यो गलत हो। म त एकताको पक्षमा असाध्य धेरै खुसीका साथ लागि नै राखेको छु। मैले धेरै एमालेको नेताहरुसँग कुरापनि गर्दै आएको छु र यो बीचमा हामी रिजर्भेसेनमा बसेका छैनौं। एकताको पहल गरिनै रहेका छौं। अहिले दुईवटा अध्यक्ष बाहेक पार्टी एकताकालगि कुनैपनि नेताहरुको भूमिका तोकिएको छैन। आन्तरिक रुपमा म एकताको पक्षमा छु। सेतोपाटी मार्फत म सबैलाई अपिल गर्न चाहान्छु पार्टी एकताबाट पछि हट्न अब कसैलाई मिल्दै मिल्दैन। तर सबैले बुझ्नु पर्छ, सम्मानजनक एकता सबैले खोज्याछन् ।
दाङ ५ नं. प्रदेशको प्रदेश राजधानी हुने भन्ने सवालमा के हुन्छ?
दाङ प्रदेश राजधानी हुन्छ। मेरो विचारमा अझै पनि पहिले र अहिलेसम्म मैले प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत राज्यका प्रमुख निकाए सुरक्षा निकाएका छलफल अन्तराष्ट्रिय अनुभव सबैले गर्दा ५ नं. प्रदेशको राजधानी दाङको विकल्प छैन।
त्यसको निमित्त राजनीतिक दबाव लगाएत अन्य खालका अन्तरविरोध छँदैछन् र त्यसलाई हलगर्न नेताहरु लागि नै राख्नु भएको छ। त्यस कारण यसमा कुनै द्धविधा छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले केही समय अगाडि देखि सक्नु भयो , प्रधानमन्त्रीजीले सबैको चुनाव नै काठमाडौं बनाउँछु भनेर अभिव्यक्त गर्नु भयो तर निर्वाचन आयोगले सात ठाउँमा तोक्यो। सात ठाउँ मध्य ५ नं. प्रदेशको निर्वाचन दाङमै हुन्छ भनेर तोकिसकेको छ। राजधानीको निम्ति यो नै औपचारिक र प्रारम्भिक सुरुवात हो नि। अब दाङ लगाएत सातै प्रदेशमा राजधानी बन्ने पक्रिया सुरु भइसक्यो।
तर सरकारले घोषणा गरेको छैन नि? उस्ले घोषणा नगर्दा सम्म त सम्भावना मात्रै न हो नि हैन?
सरकारले नगर्नुमा सरकारको केही बाध्यता होला । र सरकारले छिटो भन्दा छिटो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
के निर्वाचन पछि अब राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको हो ? के अब देश सम्वृद्धिको मार्गमा जान्छ?
कुुनै पनि निर्वाचनपछि कुनैपनि संक्रमणकालको ठूलो अंश समाप्त भएकै हुन्छ। र नयाँ सरकार बनेपछि बाँकी अंश सिधिन्छ । तर हिजोको संक्रमणकालको अंश अझैं केहि त बाँकी नै छ। जस्तो शान्ति पक्रियाको टिआरसीले र व्यपक्ता आयोगले गर्ने काम बाँकी नै छ। त्यो टुङ्गियो भनेत फेरि सिधिन्छ नै । यो पिरियड भन्नु न । यो अवधिमा भएको शान्ति प्रक्रियाको पहल कदमीको अन्त्य हुन्छ तर फेरि नयाँ ढंगले संस्लेशन गर्नुपर्ने हुन्छ नै ।
कांग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरोस भन्ने चाहनुहुन्छ र बिप्लव तथा बैद्यहरुलाई कसरी मिलाएर लग्नुहुन्छ ?
अहिलेको चुनावले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट प्राप्त भएको छ। त्यो उस्लाई जनताले दिएको म्यान्डेट हो। यदी साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने नेपाली कांग्रेसले अब उस्को पराजयलाई स्वाभाविक रुपमा स्वीकार्नुपर्छ। उस्ले हारका आन्तरिक कारण खोज्नु पर्छ। समिक्षा गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा छिटोभन्दा छिटो सरकार छोड्दिने र नयाँ सरकार बनाउनका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सत्तापक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र अर्काै पाँच वर्षको लागि प्रतिपक्षको तयारी गर्ने कांग्रेसको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मैले ठाँन्छु।
तर कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँचवर्ष मिलेर सत्ता चलाअौं भनेको छ रे? 'सम्मानजनक एकता' नभए कांग्रेसतिरै जाने होला नि?
वामपन्थीहरूको गठबन्धनवाट भएको एलायन्सले चुनाव जित्या हो। चुनावमा नेकपा एमालेले माओवादीलाई भोट हालेको र माओवादीले एमालेलाई भोट हालेको हुनाले एक अर्कामा त्यहाँ मेल तालमेल छ। त्यसकारण वामपन्थी सरकारको विकल्प अहिले छैन। अर्काै विकल्प खोजीहाल्ने बेला अहिले छैन। त्यसकारण हामी त वामपन्थी सरकारको पक्षमै हुन्छौं।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २८, २०७४, १०:४३:०५